Wararka Maanta: Talaado, Mar 26, 2013-Maamulladii Gobolka Bay iyo Degmada Baydhabo oo la dhaariyay iyo Jawaari uu dib ugu soo laabtay Muqdisho (SAWIRRO)
Kaddib dhaarta, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaliya, Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) iyo xildhibaannadii ku sugnaa Baydhabo waxay dib ugu laabteen caasimadda Soomaliya ee Muqdisho.
Laba xildhibaan oo ka mid ah xildhibaannadii baarlamaanka ayaa magaalada Baydhabo ku haray, kuwaasoo kala ah Sheekh Aadan Madoobe iyo Maxamed Ibraahim Xaabsade, kuwaasoo u haray hawlo kusaabsan maamulka la dhaariyay.
Dhanka kale, magaalada Baydhabo ayaa waxaa xalay ka da’ay roobkii ugu xoogganaa toddobaadkan, inkastoo la sheegay in gobolka Bakool uu ka da’ay dhammaan degmooyinkiisa roob-wayn , taasoo ay ku riyaaqeen beeraleyda iyo xoola dhaqatada ku nool gobolkaas.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Prof. Jawaari ayaa Baydhabo ku sugnaa magaalada Baydhabo labadii maalmood ee lasoo dhaafay, isagoo kulammo looga hadlay ammaanka la yeeshay saraakiisha Itoobiya, kuwa AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya.
Tan iyo markii ay dowladda Soomaaliya u magacowday gobolka Bay iyo degmada Baydhabo maamullo cusub ayaa waxaa taagnaa khilaafyo soo laalaabtay, kuwaasoo ay u muuqato in xal kala dambeys ah loo helay.